Ilayisensi -Iimpawu zeLotyantropy yePhupha kunye neentsingiselo | Isichazi-magama samaphupha - Isichazi Magama Sephupha
Iphepha-mvume lochazo-Ilayisenisi yamaphupha eLycanthropy kunye neentsingiselo
Ilayisenisi -Iimpawu zePhupha leLytanthropy kunye neentsingiselo
Ilayisenisi - iLycanthropy
Amaphepha-mvume (Amaphepha-mvume) Amaphupha
Amalungelo kunye namalungelo; izinto esinokukwazi ukuzenza ngokusemthethweni nangokokuziphatha. Ke, imibuzo apha ibhekisa kuhlobo luni lwephepha-mvume eliboniswayo, kwaye kwenzeka ntoni malunga nelayisensi ephupheni. Ngaba uyayinikwa, uyithathe, uyikrazule?
Ukuba kuvavanyo lokuqhuba okanye kufuneka uye kwisikolo sokuqhuba kungekudala, oku kungenzeka ukuba liphupha elinemeko engafunekiyo ukutolikwa ngakumbi ( jonga imoto ).
( Jonga ikhandlela, uMlilo, iTotshi )
Ukuqonda. Ingqondo esebenzayo nenengqondo.
Ukukhanyiselwa kwengqondo okanye yokomoya.
Ithemba (umzekelo, 'ukukhanya ekupheleni kwetonela').
Ubukho bokomoya ( bona Ingelosi, Ghost, Icons ).
Ukongezwa kwamandla e-auric yobuqu, ukujongwa kumbono wephupha.
Ukuba sowuzakuthatha uhambo lwaselwandle, oku kungabonisa ukungathandabuzi kwicala lakho, ngakumbi uloyiko lwengxaki elwandle okanye uloyiko lokuntywila ( jonga isikhephe, Amanzi ).
Ukuba ubusengxakini, eli phupha libonisa ukuba ithemba lisondele, kwaye ukubuyela kwakhona kuya kuza.
Amandla akhokelayo, ngokuhambelana nengelosi ( khangela ukuKhanya ).
Ukuba umntu umi phezulu kwigumbi lokukhanya, le inokuba yenye inqaba okanye ibhalkhoni iphupha elithetha ukuba nguwe othumela umyalezo wethemba okanye woncedo.
( Bona Amafu, Iintlekele, Umlilo, Imvula, Izaqhwithi )
Uphawu lobudoda. Kwiintsomi zamandulo, umbane wawuchumisa isisu senzonzobila ukuqala kwendalo.
Ukutshatyalaliswa nokonakala. Amakhadi eTarot abonisa inqaba iqhekeka yaphazanyiswa ngumbane. Ukutolikwa kwekhadi leNqaba kukuphanziswa.
Isibane kunye namandla okuphefumlelwa.
Ingqumbo kaThixo okanye yobulungisa. Kwizithethe zaseAfrika, umntu osindayo xa ebethwa ngumbane uyagxothwa kuba ethathwa njengophawu lomgwebo onzulu kaThixo. Amasiko amaninzi aseYurophu abonisa umsindo woothixo ngokufanayo ngombane.
Amaphupha malunga neentyatyambo ze-lilac asibiza ukuba sikhumbule ukuba asinakuhlala sikholelwa yonke into esiyivayo. Thatha ixesha lokuphanda iinyani xa usiva intlebendwane okanye ngento ekufanele ukuba 'ziindaba zokwenyani'.
Ukuphupha i-lilac nako kungangumqondiso wokuba umcimbi uzayo ongacingi ukuba uya kuwo ubalulekile kuba kuninzi okwenzeka ebomini bakho. Nangona kunjalo, i-lilac ibonakalisile emaphupheni akho njengomyalezo wokuba kuya kulo msitho njengoko kunokuba kuhle kakhulu kuwe.
( Jonga iintyatyambo, iGadi )
KubuKristu, inyibiba iluphawu lukaKristu ( bona Iimpawu ).
Ulonwabo lwasekhaya kunye nemisebenzi. E-China, le ntyatyambo isetyenziswa rhoqo ukuhlonipha uThixo weKhitshi.
Ukuqhuba usizi lwakho ngokutshintsha endaweni yobuhle. EJapan, uMnyhadala wokuCoca uLily wenziwa ngenjongo yokugxotha imvula egqithisileyo.
Ukuba inyibiba ikhula egadini, oku kufanekisela umnqweno wokugcina iindwendwe ezingafunekiyo ziphume kwindawo yakho yabucala.
Uphawu lwesiFrentshi: Iinyibiba ziyimifuziselo yethamsanqa kunye nokuzithoba.
Inkcubeko yaseMexico: Iinyibiba zibonisa izizathu zokubhiyozela.
Iimpawu zeTshayina: Inyibiba ngumfuziselo obonisa ukwamkela iindwendwe ebantwini okanye izimvo.
Inyibiba yeNtili: Umntu ongenakulindela ukuba angakunika izindululo ezinomdla kungekudala.
( Jonga ezobuGcisa, i-Inki, ukuBhala )
Imida onokuthi uyiphawule, okanye eyenziwe ngabanye abantu, echaza indawo yakho kunye nemithetho eyisiseko.
Ngokufuziselayo, ukuzoba umgca kwimeko eye yaphuma esandleni ngokoluvo lwakho, okanye ukubamba umgca ngokubhekisele kwinkolelo okanye into oyithandayo.
Ukuwela umgca: Ukugqitha ngakwicala elithile, okanye ukwaphula i-taboo.
yintoni intsingiselo yezikhombisi ezibalaseleyo
Iziphumo zezenzo okanye ukungasebenzi, ngakumbi ezifikelela kwikamva (umzekelo, into eyenzekayo 'ezantsi komgca').
Ukucima umgca kubonisa ukucocwa kwemida okanye izithintelo ezazibalulekile ngaphambili.
( Bona Izilwanyana, Ikati, Ingwe )
Ingonyama amaphupha ayagquma njengamaphupha njengee-harbinger zokuhlawula ngokukodwa ubundlongondlongo okanye umsindo, ngakumbi ukuba ingonyama izingela amaxhoba.
Ngaba lixesha lokuba uzingele okanye ngaba 'uzingelwe'?
Umgqumo kunye nengxolo yomntu oqhayisayo, owazisa ubukho bakhe kubo bonke abaya kuphulaphula.
Ulawulo okanye igunya. Inkqubo ye- Ingonyama yaziwa njenge 'kumkani wezilwanyana' kwaye luphawu olunamandla lwelanga.
AmaHindu: Umtshabalalisi weedemon, ezinokubandakanya iinkumbulo ezimbi, amava adlulileyo kunye neziyobisi. Ingonyama yayingumzimba wesine kaVishnu.
Buddhist: Ukukhusela umthetho, kodwa ukwenza njalo ngethambo elithambileyo lemfesane.
Ukunikela ingqalelo. Kwiinkolelo zesintu kuthiwa ingonyama ilele ngamehlo ayo ahlala evulekile.
( Bona Izilwanyana, Inyoka, Inyoka )
Ngenxa yemvelaphi yayo yakudala, iingcali ezininzi zengqondo zijonga icikilishe okanye iphupha lenyoka njengophawu loQoqosho oluHlanganisiweyo okanye indalo yasendle ngaphakathi.
E-Egypt okanye eGrisi, imiqondiso yethamsanqa.
Afrika: Inguqu kunye nokukwazi ukuziqhelanisa nemeko okuyo. Apha icikilishe lithathwa njengomntu ojika-jika.
Imizila ilukhuni kakhulu kukungcangcazela komhlaba, kwaye ineendlebe ezintle kakhulu kwaye inamehlo abukhali, ibenza babonakalise ukwazi, ngakumbi ngokwasemoyeni.
Ukungakhethi cala kunye nokukwazi ukwahlukana neemeko ezahlukeneyo. Xa irhamncwa libetha emsileni wecikilishe, kuyamangalisa ukufumanisa ukuba umsila uyaqhawuka, ushiye icikilishe likhululekile kwaye eliphilayo likhule elitsha!
( bona izikhokelo, Iimpawu zomhlaba )
i-virgo kunye neepisces umdlalo olungileyo
Ukubona izixeko ezithile, amazwe, okanye amazwe ephupheni lakho kunokuba nefuthe kutoliko olupheleleyo. Umzekelo, ukuba lo mmandla unegama lokomfuziselo njengoTaylor, MI, oku kungabonisa isidingo 'sokulungelelanisa' imisebenzi yakho okanye umlinganiswa ukulungela imeko ethile. Iindawo ezinamagama ezilwanyana zinokutolikwa ngokufanayo, njengeBuffalo, NY, ityhila ubuntu obudla ngokunyathela wonke umntu emi ngendlela yakhe.
( jonga amaqhosha )
Ukukhusela into oyithatha njengexabisekileyo okanye exabisekileyo.
Ukuvala iinxalenye zakho ezimbi, kubandakanya iinkumbulo ezimbi, imikhwa kunye neempawu.
Ukuvaleka okanye umqobo. Ukuba nobuchule, iimvakalelo, okanye amabhongo 'avalelwe ngaphandle.'
( bona Amakristali, amaGugu, amatye )
Amandla kunye nokuzimisela. Eli litye linokudibana noHercules, kwaye uAlexander Omkhulu walinika imikhosi yakhe ukuqinisekisa amandla abo.
Ujoliso lomntu ekubeni nomtsalane okanye akuyo. Njengomazibuthe wendalo, i-lodestone yayisetyenziswa ngoonongogo ukwandisa ishishini labo. Ngamanye amaxesha yayipeyintwa imibala eyahlukeneyo njengenxalenye yemilingo 'yokuzoba', enje ngombala oluhlaza ukukhuthaza ukuchuma okanye bomvu ukuqinisekisa ukuthanda okanye uthando.
Ukuxhalaba malunga nokuba liqabane lokwabelana ngesondo ngokwanelisayo. E-Indiya nase-Asiriya, abantu bayigcoba le nto emzimbeni ukuqinisekisa amandla.
( jonga iintyatyambo )
Phakathi kwamaHindu, i-lotus yegolide ibonisa into ekhoyo ye-Universe. Kwindiza yenqwelomoya, oku kufanekisela amandla angenakulungiswa elinde nje ingqalelo yakho.
Omnye umfuziselo welanga. E-Yiphutha, uMthikazikazi ongumama wayebizwa ngokuba yi-lotus eyazala ilanga.
E-China, i-lotus yegolide ibandakanya ukufuna komphefumlo okuyimfihlakalo, okufana kakhulu nengcinga yaseNtshona yokufuna i-grail engcwele.
E-India, le ntyatyambo ingcwele kuLakshmi, uthixokazi wethamsanqa. Kananjalo, ixela kwangaphambili ithamsanqa elikufutshane.
( bona isilwanyana, ingcuka )
Ukutshintsha nakweyiphi na indlela yezilwanyana kubonisa ukubuyela umva kwiindlela eziphambili zokucinga nokuziphatha. Uhlobo lwesidalwa esiboniswe ephupheni luyakunceda ubone ukuba yeyiphi inkalo yobuntu bakho ebuyela kule ndawo yasendle.
Ukudibana nommandla we-astral. I-Shamans zihlala ziguquka zibe izilwanyana ukuhamba kwilizwe lomoya.
Ngenxa yokuba intsomi ikubonisa oku njengesiganeko senyanga, oku kunokuba sesinye isibonakaliso senyanga.
Ukuthatha usapho lwakho ngeendlela ezingezizo ezokuncoma. Abantu bakudala babedla ngokukholelwa ukuba i-lycanthropy yayililifa.
ukubaluleka kwenombolo 33 kwibhayibhile
Indoda ye-gemini kunye ne-scorpio bathanda ukuhambelana
yintoni i-halley's comet eyenziwe ngayo
Umfazi we-aries kunye nobuhlobo bomfazi we-gemini
uphupha ngokukhulelwa kwaye uziva umntwana eshukuma